आइपिओ पर्‍यो! अब दोस्रो बजारबाट कसरी बेच्ने? (भिडिओ) :: कमल नेपाल :: Setopati
हाल प्राथमिक सेयर (आइपिओ) भर्नेको संख्या १५ लाख पुग्ने गरेको छ। तर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या भने ५ लाख ५० हजार मात्रै छ। यीमध्ये पनि अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको संख्या ३ लाख ७६ हजार मात्रै छ।
आइपिओ भर्नेमध्ये साढे ९ लाखले दोस्रो बजार (सेकेन्डरी मार्केट) बाट कारोबार गरेका छैनन्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को आइपिओ १४ लाख ७५ हजारले पाएका थिए।
‘आइपिओ भर्ने तर दोस्रो बजारमा प्रवेश नगरेको संख्या ठूलो देखिन्छ,’ नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने, ‘आइपिओ परेपछि बेच्नका लागि पनि दोस्रो बजारमा जानुपर्छ। क्रमिक रूपमा संख्या बढ्दै जानेछ।’
कतिपयलाई परेको आइपिओ दोस्रो बजारमा कसरी बेच्ने भन्ने जानकारीको अभाव छ। त्यस्तै आइपिओ परे पनि तुरुन्तै बेच्न आवश्यक नठानेका कारण धेरै दोस्रो बजारमा आएका छैनन्।
दोस्रो बजारमा कसरी सेयर कारोबार गर्न सकिन्छ?
सेयर किन्न वा बेच्न हाल अनलाइनबाटै आदेश दिन सकिन्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले आफूलाई कारोबार गर्न नजिक हुने ब्रोकर कम्पनी छनौट गर्नुपर्छ।
हाल देशभर ५० वटा ब्रोकर कम्पनी छन्।
ब्रोकर कम्पनी छनौट भइसकेपछि ब्रोकर खाताका लागि केवाइसी फारम भर्नुपर्छ। केवाइसी भर्दा आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी, पासपोर्ट साइजको फोटो, बैंक खाता नम्बर, डिम्याट खाता नम्बरसहित आफैं ब्रोकर कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ।
केवाइसी फारम भरिसकेपछि मात्रै अनलाइनबाटै कारोबार गर्न अनलाइन कारोबार (टिएमएस) खाता खोल्न सकिन्छ। ती दुवै फारम भरेर बुझाएको करिब एक सातामा आफ्नो इमेल ठेगानामा ब्रोकर कम्पनीले 'युजरनेम' र एउटा वेबलिंक पठाउँछ।
सो वेबलिंकमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ नयाँ पासवर्ड हाल्न सुझाव दिइन्छ। त्यहाँ आफूले सम्झनेगरी पासवर्ड हालेर ‘सबमिट’ गरेपछि टिएमएसको पासवर्ड तयार भयो, युजरनेम छँदैछ।
अब टिएमएस (ब्रोकर कम्पनीको नम्बर) डट नेप्सेटिएमएस डट कम डट एनपी [tms(नम्बर).nepsetms.com.np} लिंक खोलेर युजरनेम, पासवर्ड र दिइएको 'क्याप्चा (Captcha)' राखेर टिएमएस खोल्न सकिन्छ।
यसरी खुलेको लिंकमा बायाँतर्फ अर्डर म्यानेजमेन्ट (order management) मा गई किन्न वा बेच्न आदेश दिन सक्छौं। सो आदेश म्याच भएपछि कारोबार सम्पन्न हुन्छ। आफूले दिएको आदेश कारोबार भयो वा भएन भनेर हेर्न ट्रेड म्यानेजमेन्टअन्तर्गत डेली ट्रेडबुकमा गई हेर्न सकिन्छ।
बुझ्नुपर्ने एउटा विषय, नयाँ हुनुहुन्छ भने आइपिओ बिक्री गर्न तपाईंलाई कुनै समस्या हुँदैन। तर दोस्रो बजारबाट खरिद गर्नगि ब्रोकर कम्पनीमा निश्चित रकम पहिले नै धरौटीस्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जति रकम धरौटीस्वरुप जम्मा हुन्छ, त्यसको चार गुणासम्म कारोबार गर्न पाइन्छ। तीस हजार रूपैयाँ धरौटी राखेमा एक लाख बीस हजार रूपैयाँसम्मको सेयर खरिदका लागि अर्डर गर्न सकिन्छ।
टिएमएस खुलिसकेपछि कसरी गर्ने कारोबार? हेर्नुस् भिडिओः
कुन ब्रोकर कम्पनीका कति छन् ग्राहक ? कतिले गर्छन् अनलाइन कारोबार?
अनलाइन ग्राहक संख्या
कुल सक्रिय ग्राहक
अनलाइनमा सक्रिय ग्राहक
जे एफ सेक्युरिटिज
मल्ल एण्ड मल्ल सेक्युरिटिज
थ्राइब ब्रोकरेज सर्भिस
नेपाल स्टक हाउस
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज
मिडास स्टक ब्रोकरेज
दक्षिणकाली इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज
कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज
दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी
लिन्च स्टक मार्केट
साउथ एसिएन बुल्स
डायनामिक मनी म्यानेजर
क्रिस्टल कन्चनजंगा सेक्युरिटिज
इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल
भृकुटी स्टक ब्रोकिङ
श्री हरि सेक्युरिटिज
आर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज
(हेर्नुस् ब्रोकर कम्पनीको नाम, ठेगाना र फोन नम्बर)
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १७, २०७७, ०४:१६:००